थाहा पाईराखौ, कीबोर्डमा हुने १२ वटा फङ्सन की ले के काम गर्छ ?
काठमाडौं । एउटा पुरा आकारको कीबोर्डमा जम्मा १०१ देखि १०५ सम्म की हुने गर्दछन् । यद्यपि कम्प्याक्ट सिस्टम वा ल्यापटपमा यस्ता कीको संख्या कम हुने गर्दछ ।
F2: यो कीको सहयोगमा तपाईं कुनै पनि फाइललाई रिनेम गर्न अर्थात त्यसको नाम एडिट गर्न सक्नुहुन्छ । जब धेरैजसो फाइलको नाम एउटै जस्तो हुन्छ, त्यस्तोमा ती सबै फाइललाई सेलेक्ट गरेर यो की दबाउँदा सजिलोसँग नाम फेर्न सकिन्छ ।
माइक्रोसफ्ट वर्डमा Ctrl को साथमा यो की प्रेस गरेर फाइलको प्रिन्ट प्रिभ्यू हेर्न सकिन्छ । साथै यदि तपाईं माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने यसको सहयोगमा कुनै बक्समा कन्टेन्ट थप गर्न सक्नुहुन्छ ।
F4: माइक्रोसफ्ट वर्डमा यो की प्रेस गर्दा पछिल्लो काम दोहोर्‍याउन सकिन्छ । उदाहरणको लागि तपाईंले जुन शब्द टाइप गर्नुभएको थियो, त्यो पुनः टाइप हुनेछ । साथै जुन शब्द बोल्ड गर्नु भएकोछ, त्यो पनि त्यस्तै गरी टाइप हुनेछ ।
यसैगरी Alt+F4 र Enter एक साथ थिचेर कम्प्युटरलाई लगअफ अर्थात बन्द गर्न सक्नुहुन्छ । डेक्सटपमा कुनै प्रोग्राममा काम गरिरहनु भएको छ भने Alt+F4 दबाएर त्यसलाई अथवा विण्डोलाई बन्द गर्न सक्नुहुन्छ ।
यदि तपाईंले ब्राउजरमा कुनै ट्याब खोलिरहनु भएको छ भने Ctrl+F4 थिचेर त्यसलाई बन्द गर्न सक्नुहुन्छ भने माइक्रोसफ्ट एजमा F4 प्रेस गरेर एड्रेस बारमा पुग्न सक्नुहुन्छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलवार, माघ १३, २०७७, १०:१८:३३
क्यूआर कोड भुक्तानी बढ्न थालेपछि मापदण्ड तयार
जहाजमा यात्रा गर्दा मोबाइल किन ‘एयरप्लेन मोड’ मा राख्नुपर्छ ? यस्तो छ जान्नैपर्ने कुरा
ड्राइभिङ लाइसेन्सका लागि घरबाटै यसरी भर्नुहोस् फर्म ( अनलाईन बिधि सहित)
अब ‘क्यूआर कोड’ मार्फत नयाँ बसपार्कमा बस टिकटको भुक्तानी
अब सरकारी सेवा लिँदा कागजपत्र बोक्नुपर्ने झन्झटको अन्त्य, हेर्नुहोस् नागरिक एपले यसरी कामगर्छ
आइतवार, माघ ४, २०७७ जनता नेपाल
नेपाल टेलिकम प्रयोगकर्ताले यी वेबसाइट चलाउँदा पैसा लाग्दैन
नेपाल टेलिकमको नेटवर्कबाट कतिपय वेबसाइट निःशुल्क रुपमा हेर्न सकिन्छ भन्ने विषय सबैलाई थाहा नहुन सक्छ । टेलिकमले २०७४ साल वैशाख १ गतेदेखि नेपाल सरकारका वेबसाइट मोबाइल डेटाबाट निःशुल्क हेर्न सक्ने सुविधा सुरु गरेको थियो । पुरा पढ्नुहोस्
धमाधम रिहा हुन थाले विप्लवका नेता–कार्यकर्ता शुक्रवार, फाल्गुन २१, २०७७